विगतका घटनासिर्जित तनावबाट कर्णालीवासी सबैभन्दा बढी प्रभावित, कुन प्रदेशमा कति ? – Health Post Nepal
विगतका घटनासिर्जित तनावबाट कर्णालीवासी सबैभन्दा बढी प्रभावित, कुन प्रदेशमा कति ?
२०७६ मंसिर ४ गते ९:२१
पछिल्लो समय तनाव आमसमस्या बनिरहेको छ । यतिसम्म कि, तनाव महसुस गर्दिनँ भन्ने मानिस फेलापार्न मुस्किल भइसकेको छ । आफू तनाव महसुस गरिरहेको छु र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि धेरैमा छ । तर, व्यवस्थापन गर्न भने सकिरहेका हुँदैनन् । कतिपयलाई भने आफूले तनाव लिइरहेको र त्यो स्वास्थ्यसमस्याको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको थाहै पनि हुँदैन ।
मानसिक तनावका थुप्रै कारण हुन्छन् । हामीले जीवनलाई, आफ्नो अवस्थालाई, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाहरूलाई कसरी लिन्छौँ, ती चिजहरूसित हामीले झेल्ने तनाव सम्बन्धित हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई विगतको कुनै घटनाले ज्ञात वा अज्ञात रूपमा तनाव दिइरहेको हुन सक्छ भने कसैलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाले । कतिपय भने आधारभूत आवश्यकता, भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकता तथा इच्छा–चाहनाको पूर्ति नहुँदा तनावमा गइरहेका हुन्छन् । यहाँ विगतका घटनाका कारणले नेपालीले लिइरहेको तनावको अवस्थाबारे प्रदेशगत विवरण प्रस्तुत गरिन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक सर्वेक्षणले विगतका वर्षहरूका तनावपूर्ण घटनाका कारण ११ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले तनाव झेलिरहेको देखाएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा विगतका तनावपूर्ण घटनाका कारण सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशवासी तनावको सिकार हुँदै आएका छन् । यसअन्तर्गत सबैभन्दा कम प्रदेश ५ प्रभावित छ ।
विगतका वर्षहरूका तनावपूर्ण घटनाका कारण सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका १३ दशमलव ५ प्रतिशत जनता तनावको सिकार भइरहेका छन् । त्यसैगरी, यसबाट प्रदेश ३ पनि उत्तिकै पीडित छ । प्रदेश ३ का १३ दशमलव ४ प्रतिशत जनताले विगतको घटनाका कारण तनाव झेलिरहेका छन् ।
परिषद्को सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश १ मा ११ दशमलव १ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ दशमलव २ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १० दशमलव ६ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा ९.८ प्रतिशत जनताले विगतको तनावपूर्ण घटनासिर्जित तनावको सामना गरिरहेका छन् ।